अमेरिकामा रोकिएन कोरोनाः एकैदिन १९ सय ४० को मृत्यु, संक्रमित कति ? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः अमेरिकामा बुधबार १ हजार ९ सय ४० जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ । त्यहाँ मंगलबार कोरोनाका कारण १९ सय ५२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
योसँगै अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या १४ हजार ७ सय ८८ पुगेको छ ।
त्यहाँ बुधबार करिब ३२ हजार नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै त्यहाँ संक्रमितको संख्या ४ लाख ३५ हजार जनिक पुगेको छ ।
अमेरिकामा संक्रमितमध्ये २२ हजार मात्रै निको भएका छन् भने ९ हजार बढीको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
भारतमा बढ्दै कोरोना
भारतमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १ सय ७८ पुगेको छ । बुधबार १८ जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या १ सय ७८ पुगेको छ ।
कोरोना अपडेटः २४ घण्टामा कहाँ कतिको मृत्यु र संक्रमित ? (सूचीसहित)
कोरोना भाइरसः ८८ हजार बढीको मृत्यु, १५ लाख नाघे संक्रमित (सूचीसहित)